आमिर खानले समंथा-नागा चैतन्यको डिभोर्स गराएको आ’रोप ! - Thulo khabar
आमिर खानले समंथा-नागा चैतन्यको डिभोर्स गराएको आ’रोप !
काठमाडौं : तेलुगु फिल्म उद्योगको चर्चित जोडी समंगा रुथ प्रभु र अक्किनेनी नागा चैतन्यको सम्बनधवि’च्छेद भएको छ । नागा र समंथा दुवैले सामाजिक संजालमार्फत शनिबार आफूहरुको सम्बनधविच्छेदको घो’षणा गरेका छन् ।
तर, यही बीचमा बलिउड अभिनेत्री कंगना रनोटले भने समंथा र नागाको सम्बनधविच्छेद हुनुमा बलिउड अभिनेता आमिर खान जिम्मेवार भएको आरोप लगाएकी छिन् । आमिरको केही महिना पहिले मात्र पत्नी किरण रावसँग सम्बन्धविच्छेद भएको थियो ।
कंगनाले सामाजिक संजालमा पोस्ट गर्दै लेखेकी छिन् ‘आफ्नी पत्नीलाई अचानक डिभो’र्स दिने दक्षिण भारतीय अभिनेताको बिहे भएको ४ वर्ष र सम्बन्ध सुरु भएको १० वर्षभन्दा धेरै भएको थियो । हालै उनी एक बलिउड सुपरस्टारको सम्पर्कमा आए जसलाई बलिउडमा डि’भोर्स विशेषज्ञको रुपमा पनि चिनिन्छ ।
उनले कैयौं महिला र बच्चाहरुको जीवन बर्बाद गरेका छन् । यो कुनै अदृश्य चीन होइन, हामी सबैलाई थाहा छ कि म कसको बारेमा कुरा गर्दैछु ।’आमिर र चैतन्य हालै आफ्नो आगामी फिल्म लाल सिंह चढ्ढाको सुटिङ गरिरहेका थिए । यही क्रममा उनीहरु एक अर्काको सम्पर्कमा आएका थिए । कंगनाले यही कुरालाई लिएर आमिर खानमाथि आ’रोप लगाएकी हुन् ।
समंथा र नागा चैतन्यले ६ अक्टोबर २०१७ मा विवाह गरेका थिए । बिहेपछि समंथाले आफ्नो थर फेरेर अक्किनेनी लेख्न थालेकी थिइन् । हालै यी दुईको सम्बन्ध बि’ग्रिएको चर्चामा बीच समंथाले आफ्नो सामाजिक संजालमा आफ्नो नाम समंथा रुथ प्रभु बनाएकी थिइन् । उनीहरुले सम्बन्धविच्छेदको घोषणा गर्दा उनीहरुको चौथो एनिभर्सरी आउन ४ दिन मात्र बाँकी थियो ।